မကြေးမုံ၏ တွေးမိသမျှ: အမေ့ထမင်းဝိုင်းလေး
posted by mirror time 12:34 PM
8 Responses to “အမေ့ထမင်းဝိုင်းလေး”
သိပ်လိုချင်တဲ့အရာတွေကို ကိုယ်ဘာသာ ပုတ်ပုတ်ချခဲ့။
အတိတ်ကို ပြန်ပြန်ထုတ်ကြည့်ပြီး နောက်တော့ နာကျင်ကြေကွဲ။
စွန့်ပီးထွက်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပြန်လှည့်တိုင်း မေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့ အမေ့ရဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေးကို လွမ်းမိတယ်.. ပြန်လှည့်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေကို ဇက်ကြိုးမဆွဲနိုင်သရွေ့ကတော့ အမေ့ထမင်းဝိုင်းလေးနဲ့ ဝေးနေဦးမှာပဲ. အသေအချာ.. တစ်နေ့နေ့ပေါ့...
အကိုတို့အိမ်က တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ၀င်စားတဲ့အိမ်
အကိုတို့ အားရပါးရစားရင် အမေက ဘေးနားလာရပ်ကြည့် ယပ်ခတ်ပေး အဲ့လောက်ပဲ
ပို့စ်လေး ကောင်းတယ်း)
ခံစားမိတယ် သူငယ်ချင်းရေ့ အိမ်ရဲ့ တန်ဖိုး အိမ်ရဲ့ လုံခြုံနွေးထွေးမှုကို အိမ်နဲ့ ဝေးမှ မိသားစနဲ့ဝေးမှ ခံစားနားလည်တတ်တယ် မိသားစု ဆိုတဲ့ စကားကြားရင်ကို ရင်ထဲ တစ်ခုခုကတော့ဖြစ်နေကြပဲ နောက်ဆုံးတော့ အဖြည့်ခံတွေက သားသမီးတွေအိမ်ပြန်လာမယ့်အချိန်ကို မျှော်လင့်နေကြတာလေ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေးဆိုလို့ ငါလည်း မိသားစုနဲ့ အဝေးရောက်နေတဲ့ အခ်ျိန်တုန်းက ရေးဖူးတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပေါ့ နင့်ရဲ့ ဒီစာလေးနဲ့ လိုက်မယ်ထင်လို့ ထည့်ရေးလိုက်တယ် ။
ကြမ်းတမ်းတဲ့ လောဂဓံ ကို အံတု
ဘ၀ အခက် အခဲတွေ ကို ကြံကြံ ခံ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း
မိသားစု အတွက် ရှေ့ က တံတိုင်းကြီး သဖွယ် ရပ် တည်ပြီး
သားသမီးတွေ အတွက် ဘယ်တော့မှ ပင်ပန်းတယ် မထင်တဲ့အဖေ
ဒီအချိန် ကွမ်းစိုက် ဖို့ အတွက် ခြံထဲမှာ ပေါက်တူး ပေါက်နေမယ့်
အဖေ့ ကို သနားစိတ်နဲ့လွမ်းတယ်…………….။
အဖေ့ အတွက် လက်တွဲ ဖော်ကောင်း
မောင် တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက် ဘ၀ ကို ရင်ဆိုင်ပြီး
လောကရဲ့သင်ခန်းစာတွေကို နောကြေနေတဲ့ 
စမ်းရေလို အေးမြတဲ့ မေတ်တာ နဲ့ ကျနော်တို့ ဘ၀ အတွက် လက်ဦး ဆရာ အမေ
နေ မှ ကောင်းပါ့ မလား ဆိုတဲ့ 
စိုးရိမ် စိတ်နဲ့အမေ့ကို လွမ်းတယ်……………။
ညီ ၊ညီမ တွေ အတွက် ဘ၀ ကိုပေးဆပ်
ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စ နဲ့ အဖေ့ကိုဝိုင်းကူ
သူ့ လို ပင်ပန်းမှာ စိုးလို့ 
စာကျက် ပျင်းတဲ့ကျနော့် ကို
ဂရုဏာ ဒေါသနဲ့တစ်ခါခါ ရိုက်တတ်တဲ့ အစ်ကိုကြီး
တည်ကြည် ပြတ်သားတဲ့ ရုပ်သွင်းကို
မျက်လုံး ထဲ မြင်ယောင်ပြီး အစ်ကိုကြီး ကို လွမ်းတယ်………။
ငယ်ငယ် က ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်
သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ရန်ဖြစ်ရင် ကျနော့် ဘက်က
ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက်လို ၀ိုင်းကူချပေးတဲ့ အစ်မ
အစားကြီးတဲ့ ကျနော့် ကို သူ့ ဝေစုထဲက အနစ်နာခံ ခွဲပေး
အခုနေ…မီးဖိုချောင်ထဲ မှာ ထမင်း၊ ဟင်း ချက်နေမယ့်
အစ်မ ကို လွမ်းတယ်……………။
ဈေးကြီးပေး ၀ယ်ရ တဲ့ ဟင်းလျာတွေ မဟုတ်
အငွေ့ တထောင်းထောင်း ထနေပြီး
အငယ်ဆုံး သား ကျနော့် ပန်ကန်ထဲမှာ
မိသားစု ထမင်းဝိုင်း လေးကို လွမ်းတယ်…………။
ရွာထိပ် က ညောင်ပင်ကြီးကို လွမ်းတယ်………. ။
ဘယ်သူ မှမသိအောင် ရေသွားခိုးကူးခဲ့တဲ့
ကွင်းစပ် က ချောင်းငယ်လေးကို လွမ်းတယ်..........။
ဆောင်းတွင်း အေးအေးမှာ မိသားစုတွေ အတူတူ မီးလှုံခဲ့ တဲ့ ဆောင်းတွင်းမီးဖို လေးကိုလွမ်းတယ်……….။
အမှတ်တရပေါ့ သယ်ရင်းရေ့ အလွမ်းတွေ ပြေလျှော့ပါစေ။
လေးဖြူနဲ့ မျိုးကြီး ဆိုထားတဲ့ ....
အိမ်ကို မင်းလွမ်းနေသားနဲ့ ပေတေပြီး.....
အခုလောက်ထိတော့ မင်း မခွဲစဖူး...
ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ဆိုမိရက်သား ဖြစ်သွားတယ် ။
အမေက ထမင်းဝိုင်းမှ တစ်ယောက်ချင်း ထွက်သွားတဲ့ သားသမီးတွေကို ထမင်းစားရင်း အတိတ်က အချိန်တွေ သတိရနေတဲ့အခါ....
အဲဒိ မြင်ကွင်းမျိုးလည်း ပြန်မြင်လာတယ် ။
မကြေးမုံ စာရေး အလွန်တော်ပေသည် ။ :)
အမေ့အိမ် အကြောင်း အတိတ်အကြောင်းကို တတ်နိုင်သရွေ့ မတွေးပဲနေတယ်ဗျာ...
၂နှစ်နေမှ တခါပြန်ဖို့တောင် မနည်းအားယူနေရတာ။
စာလေး ဖတ်ပြီးတော့ စိတ်တောင်မကောင်းဘူးဗျာ ရေးတတ်လိုက်တာ